Dabaysha catabatic | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan ka hadli doonnaa nooc ka mid ah neecaw buur taas oo aad ugu badan meelo badan oo ka mid ah dalkeenna sababtuna tahay dabeecadda buuralayda ah.
Inta lagu jiro habeennada cadcad hawadu waxay ku socotaa dhaadhaca buuraha ama buuraha waxayna hoos ugu dhaadhacdaa dooxooyinka halkaasoo ay ka sii waddo inay u dhaqaaqdo bannaanka. Qulqulka noocan ah ayaa loo yaqaan dabaysha katabatic (wuxuu ka yimid Griigga oo waxaa loola jeedaa "hoos"). Waxay dhigtaa habeenkii goorta dhulka waxaa lagu qaboojiyey shucaac.
Hawada la xiriirta dhulkaas qabow ayaa qabow oo markiisaba ka cufnaaneysa hawada ku hareeraysan; sidaas cuf isjiidjiidku wuxuu kugu qasbayaa inaad ka dhaadhacdo jiirada dhulka socodka hawaduna hoos ayuu u socdaa. Hawada ayaa ku sii socota xiriirinta dhulka qabow waxayna sii wadaa inay lumiso kuleylka; sidaa darteed kuleylku ma ahan adiabatic (wuxuu ku beddelaa kuleylka dhexdhexaadiyaha) dhaqdhaqaaquna wuu sii socdaa.
Guud ahaan, neecawda buurta noocan ahi aad bay u daciif tahay. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, marka jiiraantu ay tahay mid deggan oo siman, waxay gaari kartaa xoog badan. Tani waa waxa dhacaya marka dusha sare lagu daboolo baraf ama baraf, wax aad ugu badan gudaha Antarctica. Haddii buurahu ay u dhow yihiin badda, neecawda buuraha ayaa xoojin kara neecawda dhulka habeenki, taasoo sababi karta dabaylo dhul aad u xoog badan oo badda dhexdeeda ah.
Ugu dambeyntii, ka faallo in dabaysha catabatic ay tahay mid ka mid ah farsamooyinka lagama maarmaanka u ah ifafaalaha Geddiska kuleylka, maaddaama hawada qabow ee cuf isjiidadka lagu hayn doono gunta hoose ee dooxooyinka, heerkulka xoogaa ka sarreeya buuraha dusheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Dabaysha catabatic